Mofomamy fromazy miaraka amina Manchego | Recipe ao an-dakozia
Mofomamy fromazy miaraka amina manchego
Hana mitchell | | Lakozia amerikana, Resipeo tsotra, Fivarotana mofomamy
Salama Zampabloggers (na fona amin'ireo daty ireo)!
Androany no itondrako anao fomba fahandro tonga lafatra hanatsarana ny sakafo hariva natokanao ho an'ny mpifankatia na amin'ny takariva izay nahatongavan'ilay "volontany" na fanomanana tsindrin-tsakafo ho an'ny namana na fianakaviana. Indraindray ny fanaovana mofo, ankoatry ny teknika sy matematika madio, dia resaka vintana ary fizotran'ny "mahafinaritra" amin'ny fisedrana sy hadisoana ao an-dakozia. Ka nomeko tamin'ity recette ity mofomamy fromazy miaraka amina manchego, sakafo malefaka mamy miaraka amina toetra be dia be ho an'ny mpihaino rehetra. Raha mikasa ny handresy "an'io olona manokana" io ianao dia mety hiteraka fikororohana tanteraka (ary izany dia satria ny ratsy fanahy tsy tia sombin-javatra tsara cheessecake).
Araho ny dingana tsikelikely amin'ity fomba fahandro tena tsotra ity ary aza misalasala manavao sy mampiditra karazana hafa fromazy sy kesika. Mety afaka mamorona fitiavana bebe kokoa noho izay vitako ianao.
Raha anisan'ireo mandeha amin'ny menio tsindrin-tsakafo any amin'ny trano fisakafoanana ianao ary mpankafy ny NY Cheesecake, dia tsy azonao hadinoina ity fomba fahandro mofomamy fromazy ity miaraka amin'ny Manchego. mahery vaika
Ho an'ny fototra
70 g ny amygdala
Atody 4 M
600 g ny fromazy fanosotra (hazavana Philadelphia)
500 ml ny crème pastry ranoka
Yaorta grika Oikos
voaroy na jamam-boasary mba haingo
frezy voajanahary sy voaroy voaravaka
Notorotoroinay ny cookies tamin'ny alàlan'ny tourmix mandra-pahazoanay «vovoka cookie».
Toy izany koa no ataontsika amin'ireo almentra.
Afangaroy ireo singa roa ireo ary arotsaka eo am-pototry ny bobongolo boribory misy refy eo anelanelan'ny 18 na 20 cm.
Atsonika ny dibera ary ampio amin'ny lasitra mba hatao koba voafetaka.
Mametaka amin'ny rantsan-tànantsika na amin'ny sotro isika.
Izahay dia mametaka ny lasitra amin'ny alim-by alimo mba ho avy eo, rehefa apetraka ao anaty lafaoro ao anaty bain-marie, dia tsy mivoaka ao anaty vaky ao anaty lasitra ny rano.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 degre isika.
Apetratsika ao anaty lafaoro mandritra ny 10 minitra ny bobongolo mba ho volontsôkôlà sy hihamafy ny fotony.
Fotoana hanomanana ny fromazy fanosotra.
Nokapohinay tamin'ny siramamy ny atody, mandra-pahatonga azy ho fotsy.
Ampianay ny crème, ny yaourt grika ary ny fromazy Philadelphia.
Mikapoka amin'ny mixer izahay fa tsy amin'ny herin'ny mavesatra indrindra, te hisoroka ny fipoiran'ny bubble noho ny rivotra miditra amin'ny tahony.
Ilaina ny mikapoka an'io fangaro io amin'ny mixer, fa ataovy tsara kosa, ary ataovy izay hahazoana rivotra kely indrindra.
Manampia fromazy Manchego gadona roa sotro fihinana ao amin'ilay fangaro ary mandrora kely kokoa.
Aorian'ny 10 minitra, esory ny lasitra avy ao anaty lafaoro, ary ampidino 150 degre ny mari-pana.
Arotsakay eo ambonin ny cookies ny fromazy fanosotra
Ao anaty fitoeram-panafihana lalina, ampio rano 1 rantsan-tànana (ho an'ny bain-marie) ary apetraho amin'ny mofomamy fromazy ny lasitra anay.
Mofomamy amin'ny 150 degre mandritra ny adiny 1 sy 45 minitra isika.
Rehefa mangatsiaka ny mofomamy dia manaingo amin'ny jamam-boasary sy frezy.
Mangatsiaka ao anaty vata fampangatsiahana izahay mandritra ny adiny 2 farafahakeliny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » Resipeon'izao tontolo izao » Lakozia amerikana » Mofomamy fromazy miaraka amina manchego
Vary akoho voatetika
Zanak'ondry miaraka amin'ny dipoavatra sy ovy